Macallinka Barcelona ee Valverde oo ku dhawaaqay liiska 22-ka xiddig ee uu kala hortagi doono Dortmund habeen dambe… (Miyuu ku jiraa Messi?) – Gool FM
(Barcelona) 16 Sebt 2019. Macallinka Kooxda kubadda cagta Barcelona ee Valverde ayaa ku dhawaaqay liiska 22-ka ciyaaryahan ee uu habeen dambe kala hortagayo naadiga Borussia Dortmund.
Lionel Messi ayaa lagu soo daray liiskan uu tababare Ernesto Valverde u la safrayo dalka Jarmalka ka hor kulanka habeen dambe ay Barca la ciyaari doonto Borussia Dortmund ee Champions League.
Waxa uu Lionel Messi si wacan uga qeyb qaatay tababarkii maanta oo Isniin ahayd ay sameysay kooxdiisa Barcelona, waxaana lagu daray xiddigaha u safraya dalka Jarmalka kuwaasoo la soo ciyaari doona Dortmund.
Ciyaaryahanka xulka qaranka Argentina ayaa weli u ciyaarin kooxdiisa Barcelona xilli ciyaareedkan isagoo dhaawac kubka ah la maqnaa, balse waxaa la filayaa inuu dheelo kulanka habeen dambe ka dhici doona garoonka Signal Iduna Park ee furitaanka u ah wareega Guruub-yada Champions League.
Yeelkeede, waxaa kooxda Catalan weli dhaawacyo uga maqan daafacooda Samuel Umtiti iyo Weeraryahankooda Ousmane Dembele, inkastoo dhaliyahan Faransiiska uu ku soo laabtay tababarka.
Shabaq-ilaaliyaha kooxda Barca ee Neto ayaa isaguna tababarka dib ugu soo laabtay maanta kaddib markii uu ka soo kabsaday dhaawac gacanta ah, waxaa lagu daray xiddigaha kooxda reer Spain ee u safraya dalka Jarmalka.
Haddaba halkaan hoose ka eeg liiska xiddigaha Barcelona ee Macallin Valverde uu kala hortagayo Borussia Dortmund habeen dambe:-
Marc-André Ter Stegen, Neto, Nelson Semedo, Gerard Piqué, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Jean Clair Todibo, Arthur Melo, Luis Suárez, Leo Messi, Clément Lenglet, Moussa Wague, Antoine Griezmann, Jordi Alba, Carles Aleñá, Sergi Roberto, Frenkie De Jong, Arturo Vidal, Junior Firpo, Iñaki Peña, Carles Pérez and Ansu Fati.